Kuedza Amarok LinuxOS 3.2. Zvakanakisa zveDebian Hassle-Yemahara | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | 23/10/2021 22:00 | General, GNU / Linux
Iro zita reAmarok rinogona kutsausa. Kune mota yeVolkswagen, inoridza mimhanzi kubva kupurojekiti yeKDE, uye ikozvino-yakamiswa kugoverwa kweMandriva. Ichi chinyorwa hachitauri nezvechimwe chazvo
Panyaya iyi ndinoreva imwe DDesktop GNU / Linux kugovera parizvino kwakavakirwa paDebian. Iyo vhezheni yandinotaura yakavakirwa paDebian 11 ('Bullseye') neCinnamon desktop, asi inogona zvakare kutorwa neXFCE, GNOME, uye MATE.
1 Kuedza Amarok LinuxOS 3.2.
1.1 Dhawunirodha uye kuisirwa
1.1.1 Iyo yekumisikidza maitiro
1.2 kutema mukati
2 Maonero angu
Kuedza Amarok LinuxOS 3.2.
Dhawunirodha uye kuisirwa
Dambudziko rakajairika nekushomeka kusingazivikanwe kweLinux inononoka kurodha nguva. Vagadziri veAmarok vakagadzirisa izvi nekupa dzimwe nzira shanu:
Ehe, zvichienderana nekuti ndeupi waunosarudza, kumhanya kunosiyana. Chiitiko changu chekushandisa Foss Torrent chaive chakanaka.
Kusikwa kweiyo yekuisa pendrive inogona kuitwa nechero yeakajairika maturusis. Ini ndinoshandisa Fedora Media Munyori, asi sezvo yakavakirwa paDebian, iyo Ubuntu boot disk musiki anofanira kushanda.
Nhasi Ndakanyunyuta ye "Institution" mavara eUbuntu 21.10. Zvakanaka, kana paine chimwe chinhu chasara kune Amarok 3.2, ndiwo mavara. Muchokwadi, zvakatiomera kune vanhu vasingaone zviri mberi seni kuti vaone skrini yekumba, asi harisi dambudziko risingagadzirike. Chii chingave chinokanganisa ndechekuti mune yekurarama modhi iwe unogona chete kusarudza pakati pePortuguese neChirungu. Ndikati ndaigona nekuti kwandiri kuti ndinojairana neLinux zvaisareva kukanganisa kukuru, asi handikwanise kutaura kune vashandisi vatsva.
Zvakanga zvakandiomerawo kuti ndione iyo yekuisa icon pane ine mavara Wallpaper, asi idambudziko rangu uye nyore kugadzirisa.
Iyo yekumisikidza maitiro
Ini handitore zvibodzwa, asi kana ndaita, chokwadi chekusarudza maCalamares semugadziri angatovavimbisa 7 kubva pagumi. Calamares pasina mubvunzo ndiyo yakanakisa sarudzo yevose vanoisa varipo kuLinux. Ndakataura kare kuti mararamiro ehupenyu aingowanikwa muchiPutukezi neChirungu. Asi, panguva yekuisa iwe unogona kusarudza matatu akasiyana eSpanish; Spain, Mexico nePuerto Rico. Kune zvakare maviri keyboard akasiyana; Spanish uye Latin America.
Kupatsanura kunogona kuitwa otomatiki kana nemawoko. Manual partitioning iri nyore kwazvo uye Calameres inokuudza maitiro ekugadzira iwo eUEFI boot.
Paunenge uchigadzira mushandisi unogona kutsanangura kuti ndiye maneja kana kugadzira imwe inozadzisa iro basa.
Paunotangazve komputa, iyo yakajeka bootloader skrini inoonekwa. Ndakakwanisa kuona kuti mugadziri aona mamwe akaisirwa masisitimu ekushandisa uye anobvumira kuwana iwo pasina matambudziko. Pakupera kweiyo boot process unoona hwindo rekupinda umo iwe unofanirwawo kuisa zita rekushandisa. Chinhu chisina kunetsa kana iwe uine mumwe chete mushandisi uye iwe wakachiita icho maneja.
Amarok Linux OS 3.2 inokugamuchira iwe mubatsiri anotendera iwe kuti uone ese ekugadzirisa sarudzo pane imwechete skrini kuti usiye sisitimu kune zvaunoda.
Kuwanikwa kwechirongwa kunovimbiswa zvese nekuda kweakakura Debian repositori uye imwe yekugovera yega, kwatinofanira kuwedzera iyo FlatHub assortment (Flatpak Format). Pamusoro pezvo, nekuda kweGdebi tinokwanisa kugadzika maDEB mapakeji akatorwa kubva pawebhu. Kana izvo zvisina kukwana, unogona kugara uchiwedzera rutsigiro rweSnap mapakeji.
Ndataura pamusoro apa kuti kushandiswa kweScidids kunovimbisa iwe mapoinzi manomwe. Kuchengeta Synaptic seimwe nzira kune chitoro cheapp inopa imwe 3. Zvakadaro, kana iwe uchida mugadziri ane mavara ane zvidzitiro, iyo software yekuisa inoshanda zvakanaka.
Kunyange iyo assortment yesoftware yakawanda, Amarok LinuxOS 3.2. haiuye nemapurogiramu akawanda asati aiswa. Vhidhiyo inoridza (VLC), bhurawuza (Firefox), muterevhizheni mutengi (QBittorrent) uye muoni wedhipatimendi.Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa maturusi anodikanwa ekumisikidza sisitimu yekushandisa uye kuisa zvirongwa.
Amarok LinuxOS 3.2. kugovera kukuru kunopa zvarinovimbisa; nyore kushandisa uye kuwanikwa kwakakura kwesoftware. Ndiyo sarudzo yakanaka kana iwe uchida sisitimu yekushandisa inopa rusununguko rwakakura mukumisikidzwa pasina kuomesa hupenyu hwako kuti uiwane.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuedza Amarok LinuxOS 3.2. Yakanakisa yeDebian pasina matambudziko
Inoshanda pane disk arrays? Ndine RAID 0 umo ini ndatova neWindows, uye ndakasiya nzvimbo yakakwana yeMX Linux 21 Wild Flowers, asi kuiswa uku hakuna kuziva kurongeka, saka ndiri kutsvaga XFCE sarudzo Nezve Debian ... Ndatenda.
Pindura kuna Davienrique
Kuedza shangu akadaro
Kwete, haisi yega distro ine maCalamares semugadziri ichakushandira iwe, nekuti maCalamares haazive kupambwa, mamwe distro anozviita, asi nekuti iwo e distro akawedzera. Zano rangu ndere debian kuyedza xfce, ini zvakare ndine zero raid uye ikozvino kwechinguva ikozvino, vese debian vakagadzikana uye kuyedza vanoziva kupambwa, kwavasina kumbobvira vaita. Ndakarasa kuverenga yenguva yandave ndichiyedzwa uye zero matambudziko, kuyedzwa kune zita chete, yakagadzikana uye ndinoishandisa kune zvese, kutamba, kushanda, kudzidza uye yakanakisa distro yandaive nayo, kwete. kunyange yakatsiga.hapana mukaka, edza.
Pindura ku Testingpato
Yakanaka, inokurumidza uye yakanaka, uye nesoftware yakagadziridzwa, senge yazvino vhezheni yeCinnamon 5.05, mukana wekuiisa kubva kuKernel 5.14 repositori uye zvakare yazvino vhezheni yevatyairi veNVIDIA. Chokwadi ndechekuti vakazvigadzirisa.
Zvinofamba zvakanaka here nevatyairi veNvidia?
Vakuru vanogona kuiswa
Ndakanga ndine nyaya dzinoverengeka nenvidia uye debian. Nechikonzero ichocho ndinozvikanda zvakanyanya ku ubuntu kana manjaro.
Asi ndiri kuenda kuvayedza.